तरकारीवाली कुसुमलाई युरोपबाट सन्तोषको खुल्लापत्र : भोलि तिमीलाई ‘अर्चना पनेरु’ बनाउनेछन् » Khulla Sanchar
तरकारीवाली कुसुमलाई युरोपबाट सन्तोषको खुल्लापत्र : भोलि तिमीलाई ‘अर्चना पनेरु’ बनाउनेछन्
प्यारी बहिनी कुसुम (तरकारीवाली)
तिमीलाई यो परदेशी दाजुको मीठो सम्झना ।
तिम्रो र मेरो कुनै सम्बन्ध त छैन तर पनि सम्बोधन गर्दैछु बहिनी भनेर । एउटा नेपाली दाजुको नाताले यो पत्र कोर्दैछु । बहिनी दशै तिहार मनाउन तिमी गाउँ गएकी थियौ । किसान कि छोरी न पर्यौ त्यसैले आफ्नो जमिनमा बा आमाले सिर्जिएका र उत्पादन भएका तरकारी बजारसम्म बोकेर आइपुग्दा तिमी सामाजिक सन्जालकी हिरोईन भैसकेकी थियौ । तिमीलाई भने अत्तोपत्तो थिएन।
खै बहिनी तिम्रो दुर्दशा भनौ या भाग्य ? ठम्याउनै गाह्रो भो । सामाजिक संजाल फेसबुक र टुइटर मा तिम्रो तरकारीवाली नामबाट भाइरल भो ।
कुन नियतले तिम्रो फोटो त्यो पत्रकारले खिच्यो थाहा छैन । तर पनि त्यहि तस्बिरले तिम्लाई एकाएक चर्चामा ल्यायो । मिहिनेत गरेर दुई छाक टार्दै तिमीलाई यहाँ सम्म पढाईरहनुभएका बा आमाले के सोच्नु भो होला ? त्यो त मलाई थाहा छैन । तर मिडियाले तिमीलाई धेरै माथी पुर्यायो।
सुनेको छु तिमी मिहिनेती बिद्यार्थी हौ । कक्षा ११ मा पढ्दै छौ । अहिले नेपाली टेलिभिजनका प्रत्येक भित्ताहरुमा तिमीलाई नै देख्न पाईन्छ । कुशुम तिम्रो त्यो सरल अनि लज्जापन हामीले देखिसकेका छौँ ।
तिम्रो त्यो सरलपन र लज्जालुपन तिमीबाट खोसिदै गरेको अनुभूति गर्दैछु म ।
जसरी तिमी अहिले “तरकारीवाली” भएर सबै माझ चिनिँदै छौ । त्यो त पहिले तिम्रो त्यो फोटो खिच्ने पत्रकारको “नजरवाली” भएर नै सम्भब भयो । हिजो तिम्रा तस्बिरहरु कुर्ता सुरुवालमा भारी बोक्दै खिचिएका थिए । मासुम कार्यशिल र मिहिनती देखिन्थ्यौ । आज त्यही तरकारीवालीलाई मोडल बनाउने भन्दै पोज अनि आधुनिक कपडा लगाएर फोटो खिचिँदै छ । तिमीलाई हिट बनाउने बहानामा तिम्रो सरलताको लिलाम हुँदैछ बहिनी ।
तिमीले आफुले गरेको श्रम बाट पाएको उपनाम हो “तरकारीवाली” । तर मिडियामा यस्ता व्यबसायहरु छन्, जसले तिम्रो सरलता अनी सुन्दरताको चाँडै हरण गर्न तिर लाग्दैछन् ।
तिमीलाई “तरकारीवाली” बनाउने पनि यही मिडिया हो । अनि भोलिको दिनमा तिमीलाई स्तनवाली , तिघ्रावाली , छाडावाली बनाउने नि यही मिडिया हुनेछ ।
तिमीलाई चाँडै ‘अर्चना पनेरु’ बनाउने छन् । त्यसैले विन्ती तिमीलाई आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता देउ । आफ्नो उज्वल भविष्यको लागि आफ्नो बाटो नछाड ।
तिम्रो पहिरन परिवर्तनसँगै तिम्रो नाम पनि परिवर्तन गर्न थालेछन् । आजकी सोझी, सरल अनि मिहिनेती कुसुमलाई भोली मिडियामा लागेका ब्वाँसाहरुले अर्चना पनेरु बनाई छाड्नेछन् ।
हिजो मिडियामा तरकारीवाली भनेर तस्विर हेर्न पाउँदा लाग्थ्यो तिम्रो श्रम र पसिनालाई चिनाउँदैछन् । अनुहारभरी धुलो टाँसिएको साधारण कुर्तासुरुवालमा सजिएकी बहिनी ‘आहा ! कति राम्रो तस्विर’ भन्ने लाग्थ्यो ।
तर हिजो माटो टल्किएको अनुहारमा आज पाउडर टल्कियो । कुर्ता छोडी आकर्षक पहिरन लगनएर विभिन्न पोजमा फोटो खिच्यौ। तिमीलाई तरकारीवालीबाट देखावालीको ट्याग लगाउने अभ्यास भईरहेको छ होस् गर ।
तिमी रुपमा पनि राम्री छौ, सरल छौ, मिहिनेती छौ, अनि भर्खर कक्षा ११ मा पनि पढ्दै छौ । राम्रो सँग पढ । रुप र मनकी राम्री तिमीलाई तरकारीवालीकै वास्तविकतामा हेर्न पाईयोस् । भोलीका दिनमा तिमीलाई अर्चना पनेरुकै हालतमा देख्न नपरोस् । तिमीलाई यो परदेशी दाजुको शुभकामना !